China 100ml iglasi isiqholo ibhotile yeglasi izithambiso mveliso kunye nabenzi | Comi
Inombolo Inombolo: I-KMPB100-001
Ixabiso leFektri ye-100ml ye-Perfume yeglasi yeglasi yeglasi yePakethe yamafutha
Uhlobo lwebhotile yesiqhumiso esiqhelekileyo.
Ibhotile yenziwa kusetyenziswa iglasi ekumgangatho ophezulu eyongeza ixabiso kwi-brand yakho, ngelixa indawo ethe tyaba ikunika indawo eyaneleyo yokubeka iilebheli ezinophawu lokwenza iibhotile zibe zezakho.
Uyilo olucekeceke lokujongwa kwepremiyamu.
Ingasetyenziswa nge atomiser.
Ilungele iziqholo neziqholo.
Singumenzi wobuchule kwiibhotile zeglasi, kunye nokubonelela ngeenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo.
COMI AROMA-Khetha thina, Khetha ubuchule kunye nokunceda.
I-KMPB100-001 100ml 43mm 133mm 155g
Egqithileyo Ibhotile yeglasi eneglasi eyi-50ml
Okulandelayo: Iglasi Ibhotile